KM PLAYER FREE DOWNLOAD NA RUSSIAN MAKA WINDOWS 7 - MMEMME NYOCHA - 2019
Taa, ọtụtụ egwuregwu dị iche iche, nke ọ bụla nwere ọrụ nke aka ya. Isiokwu a ga-atụle, ikekwe, ihe kachasị ewu ewu dị otú ahụ - KMPlayer.
KMP Player bụ onye mgbasa ozi mgbasa ozi a ma ama nke nwere ike igwu ma faịlụ na kọmpụta na ntaneti vidio. A na-enye ọkpụkpọ ahụ ụdị atụmatụ dị mma nke onye ọrụ ahụ nwere ike ịchọrọ ka eji ya.
Nkwado maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu
KMPlayer nwere ike ịdị na-adọrọ mmasị ndị ọrụ, nke mbụ, n'ihi na akwadoro ya maka ọtụtụ usoro ọdịyo na usoro vidio.
Naanị otu pịa na bọtịnụ pụrụ iche, vidiyo gị nwere ike ịgbanwere site na 2D-mode gaa na 3D, na-enye nlegharị anya dị mma na iko ndị anaglyph pụrụ iche.
Tinye mmetụta na nzacha
Ngwurugwu nke ihe ndi ozo nwere ike ime gi ka o di mma-gbanwee onyonyo vidio na olu a na-egwu. Dịka ọmụmaatụ, n'adịghị ka usoro ihe omume Media Player Classic, o nwere ọtụtụ ntọala na ngwaọrụ dị ukwuu iji meziwanye agba na vidiyo.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla dị na onye ọkpụkpọ ahụ nwere ụzọ mkpirisi ya. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịtọ njikọ onwe gị.
Otu n'ime njirimara na-adọrọ mmasị nke ọkpụkpọ mgbasa ozi a bụ iji mee ka o doo anya na o nwere ike iwepụta ụda, oyiyi, ma ọ bụ vidiyo dum site na vidiyo.
Na-arụ ọrụ na ndepụta okwu
Usoro ihe omume ahụ na-akwado usoro niile nke ndepụta okwu, na nke ị gaghị enwe nsogbu na incompatibility. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịgbakwunye faịlụ vidio na ndepụta okwu na vidiyo ma ọ bụ mepụta ha kpọmkwem site na windo onye ọkpụkpọ, na-eme ka i nwee uche.
Dabere na nlele ihuenyo, àgwà vidiyo ma ọ bụ mmasị gị, ị nwere ike ịgbanwe oge ọ bụla, nhazi akụkụ na ọbụla vidio, si otú ahụ belata akụkụ ndị na-adịghị mkpa.
Ngwaọrụ arụpụtara iji gbanwee ọkpụkpọ ahụ ga-agbanwe ọsọ nke igwu egwu vidiyo ma ọ bụ egwu, melite ogo ọdịyo, gbanwee ụda ma karịa.
Inweta ihe omuma banyere ihe ndekọ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma banyere faịlụ a na-emeghe ugbu a na mmemme ahụ, ịnwere ike ịnweta ozi a n'enweghị enyemaka nke ngwa ndị ọzọ.
Mepụta na jikwaa ibe edokọbara
Iji gaa n'otu ebe na vidiyo ahụ, usoro ihe a na-enye ọrụ iji mepụta ibe edokọbara.
Ebe ọ bụ na KMPlayer na-emetụta ọkpụkpọ Winamp dị egwu, plugins nwere ike imejupụta maka Winamp nwere ike ịrụ ọrụ na KMPlayer. Njirimara a ga-enye gị ohere igbakwunye atụmatụ ọhụrụ na usoro ihe omume ahụ.
H.264 bụ onye na-ewu ewu nke na-enye gị ohere iwepụta vidio, ka ị na-enwe otu àgwà ahụ.
Uru nke KMPlayer:
1. Akwukwo ntanetị nke enyi na enyi, ma ka na-adịkwaghị mma nke Ahịa Player;
2. Enwere nkwado maka asụsụ Russian;
Ihe ọghọm nke KMPlayer:
1. Mgbe enweghi faịlụ na mmemme ahụ, a na-egosipụta mgbasa ozi na ihuenyo ahụ;
2. N'oge usoro nhazi ahụ, ọ bụrụ na agbahapụbeghị ya, oge ngwaahịa Yandex ga-arụ ọrụ.
KMPlayer bụ ọkpọ mgbasa ozi dị ike ma dịkwa mma nke nwere ọtụtụ atụmatụ na ntọala. Onye ọkpụkpọ ahụ jisiri ike kwado onwe ya n'etiti ọtụtụ nde ndị ọrụ, nọgide na-enweta obi ike.
Download KMP Player maka n'efu
Esi tinye igbe na KMPlayer Gbanwee olu na KMPlayer Gbanyụọ ma ọ bụ mee ka ederede aha na KMPlayer Enweghị ụda na KMPlayer. Ihe ị ga-eme
KMPlayer bụ onye na-arụ ọrụ multimedia nwere ike ịnweta ohere ọ bụla nke na-enweghị egwu maka igwu faịlụ vidiyo na ọtụtụ ntọala bara uru.
Onye Mmepụta: KMP Media Co., Ltd